भ्रष्टाचारको निदान र सुशासनको उठान « News of Nepal
अब यसको लागि को दोषी त भनेर खोट्याउन खोज्दा अनैतिक आचरण गर्ने र गराउने दुवै बराबरी भागी छन् । हामीमा धैर्य छैन । सबैले आफ्नो काम छिटो र सजिलो बाटोबाट गराउन खोज्दा यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । गम्भीर भएर सोचौं– मसित छ, म दिएर काम गराउँछु । तर नहुने पनि त छ, उसले आफ्नो काम कसरी गराउँछ ? यसरी आफ्नो अन्तर्मनलाई साक्षी राखेर सोच्यौं भने हामी यस्तो कार्य गर्नबाट अवश्य पनि पछि हट्नेछौं । अतः धैर्य गर्ने बानीको विकास गरौं, छोटो र चोर बाटो नरोजौं, आफ्नो द्वैधचरित्रलाई सुधारौं, कामजस्तो कुरा र कुराजस्तो काम गरौं । यसैबाट हुन्छ भ्रष्टाचारविरुद्धको सहकार्य र सुशासनको उठान अनि देशबाट भ्रष्टाचारको निदान ।
(लेखिका उप्रेती बी.ए.एल.एल.बी. दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छात्रा हुनुहुन्छ ।)